araka ny didim-pitsarana omaly. Afaka madiodio kosa i Arphine Rahelisoa mpanao gazetin’ny Valosoa sady miandraikitra ny seraseran’ny kaominina Antananarivo (CUA) sy ny talen’ny kolontsaina eo anivon’ny CUA Patrick Andriamisa. Raha tsiahivina, notorian’ny fanjakana tamin’ny alalan’ny Etamazaoron’ny Tafika noho ny famoaham-baovao tsy marina tamin’ny tambajotra fesiboky momba ilay angidimby nisidina tao amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny 30 aogositra teo izy 4 mianadahy ireo. Resaka « cybercriminalité » no nentina niampangana an-dry zareo, ka nilatsahan’izao sazy izao, raha jerena amin’ny heloka. Ny andininy faha-20 amin’ny lalàna mifehy io « cybercriminalité » io no nampiharina. Tsy rariny ilay didim-pitsarana. Nambara fa fanalam-baraka tamin’ny alalan’ny lahatsoratra. Tsy nisy filazana hoe tafika Malagasy mihitsy tao, hoy kosa ny mpisolovava Vivier Raoelson. Tsy miditra lalina amin’ny fitsarana mpanao gazety ny minisiteran’ny serasera, hoy kosa ny Tale jeneraly Atoa Fanahimanana Tiaray, izay milaza fa mampanaja ny etika sy deontolojia no anjaran’izy ireo. Nisy fanjakana niongana ve teo sa nisy firenena nikorontana noho ny zavatra navoakan’izy ireo ? Sazy tsy misy famonjana ary ambara fa fananarana amin’ny alalan’ny fandoavana lamandy no natao ho an’ny mpanao gazety tamin’ny hadisoana arak’asa. Onitra volabe 10 tapitrisa ariary, izay mety ho karaman’ny mpanao gazety an-taonany maro. Firy ny orinasan-gazety afaka hiaina amin'izany . Na ny orinasa an-gazety mpiandany amin’ny fitondrana aza tsy manakarama ireo mpiasany amina volabe afaka hiatrehana ny tahaka izao. Firy amin'ireo orinasan-gazety eto amintsika no afaka handoa io ? Azo natao ny fandisoana sy fanitsiana ny vaovao na “démenti”, saingy tsy te hahalala ny fanjakana. Ampahafirin’ny fanalam-baraka sy fanompana maro samihafa ao anaty “facebook” ny nataon’izy mianadahy ireo. “Rehefa tena tiana hovonoina ny alika dia lazaina fa romotra”, hoy ny fitenenana. Maro ny pejy, indrindra fa ireo manao seraseran’ny mpitondra no manao zavatra mamohehitra lavitra noho ny heloka nataon’izy mianadahy ireo, saingy tsy voakitika ireny satria manasohaso fitondrana. Hampiakatra ny raharaha amin’ny ambaratongam-pitsarana ny mpiaro ny voaheloka anio amin’ny 10 ora sy sasany maraina, ka andrasana ny tohiny.
“Mampieritreritra ity tranga iray ity satria hikatona tsikelikely ny orinasan-tserasera ary ho very asa ireo mpanao gazety raha izao no mitohy. Samy efa nanao hadisoana avokoa ny rehetra raha amin’ity sehatry ny asa fanaovan-gazety ity no jerena. Akoho ve no vonoina dia hitondrana famaky?”, hoy Atoa Rakotonirina Gerard, filohan’ny holafitry ny mpanao gazety na ny OJM.